Calligra 2.7 misy amin'ny fanovana interface | Avy amin'ny Linux
Calligra, ny Office Suite an'ny KDE mitohy mitombo, manatsara ary manampy vaovao mahaliana isaky ny fandefasana izay manakaiky kokoa ity fampiharana ity amin'ny LibreOffice y Apache OpenOffice.
ny 2.7 version an'ity Office Suite ity ary araka ny voalazan'ny lohateny dia misy ny fanovana sy ny fanitsiana ao amin'ny interface-ny, indrindra ao amin'ny bara fizarana.
Hatreto dia toy izao ny fisotroana:
fa ao amin'ny Calligra 2.7, izao dia toa izao:
Tokony hiteny ve aho hoe tiako izany? Farany hitantsika ny fanovana tsara sy mahasoa amin'ny interface. Saingy tsy izany ihany no misy.
Mpanoratra, manana vaovao fanampiana an'i EPUB3: ny formula matematika sy ny atiny multimedia dia aondrana any amin'ny ebooks misy endrika EPUB. Misy ihany koa ny fanampiana vaovao ho an'ny rakotra boky miaraka amin'ny sary
Misy sivana fanondranana vaovao ho an'ny lahatsoratra iraisana y fanatsarana ny sivana fanafarana docx, izay manana fanohanana amin'ny fomba latabatra efa voafaritra. Mariho tsara fa ireo rehetra ireo teny y Author misy amin'ny fampiharana hafa koa izy ireo.
Drafitra, ny fangatahana fitantanana tetikasa, manana fanatsarana ny fandrindrana asa y sivana fanondranana vaovao mankany amin'ny OpenDocument Spreadsheet (ODS) sy CSV.
Kexi, mpamorona tahiry sary, mihatsara manafatra angona CSV, manokana, ny data izao dia azo ampidirina anaty latabatra efa misy. Ny tenimiafina dia tsy mila boaty fifanakalozan-kevitra maoderina ary tsara kokoa ny fikirakirana azy amin'ny ankapobeny. Jereo ny lisitr'ireo fanovana feno.
endriny: Misy fanatsarana vitsivitsy amin'ireo endrika ankapobeny azo alaina avy amin'ny ankamaroan'ny rindranasa Calligra: Ny form formulateur izao dia manana fomba vaovao hidirana ilay formule: maody matlab / octave ary a modely tara. Nohatsaraina ny fitaovana famolavolana lahatsoratra mba hitantanana tsara kokoa ny fomba soratra.
Ary farany manana isika Krita, ny fampiharana ny sary hosodoko 2D, manana a saron-tava grayscale vaovao, una fitaovana fanoratana freehand tsara indrindra miaraka amin'ny tsipika milamina, a fomba fandokoana sary miaraka amin'ny borosy Krita, loko tsara indrindra amin'ny sivana abidia, una namboarina fitaovana cropping ary a fitaovana fanatsarana ny fanovana izay manampy ny mpampiasa hamorona firafitra.
Fanohanana ireo endrika fisie vaovao asio fanondranana any QML ary a sivana import / export tena nohatsaraina ho an'ny fisie Photoshop PSD. Azonao atao ny mamaky momba ny fanatsarana ao Krita amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny krita.org.
Afaka mahita ny doka ry zareo manamboninahitra eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Calligra 2.7 misy amin'ny fanovana interface
Eny, tsy sahiko ny mampiasa Kalligra hanolotra vahaolana ho an'ireo orinasa roa izay anaovako rafitra rafitra automatique birao, satria tena mampiasa LO aho.
Ankehitriny, tsy handainga aho, mieritreritra aho fa hitandrina ny Calligra ho toy ny efitrano manokana, hanao ny fitsapana aho mba hahitako fa tsara ny fanafarana ny antontan-taratasy eo anelanelan'ny suite maimaim-poana ary avy eo ny fijerin'izy ireo ny efitrano mikatona, mety ho avy amin'ny fidinana an-tany foana ary ataovy miaraka amin'ny Calligra: 3 ny tatitra momba ny asa fanompoana sy ny asa aman-draharaha ary ny asa soratra momba ny fiaraha-monina
Ho an'ity (tatitra, thesis) dia misy suite izay tsara kokoa noho ny LyX, efa nanao theses, CV ary tatitra maro aho ary mino ahy fa mendri-kaja izy ireo
Safidy maimaimpoana kalitao inona no ananantsika amin'ny automatisation birao ao amin'ny GNU / Linux :). Ny marina dia mampiasa azy io i Calligra indraindray ary - na dia zatra mampiasa Libreoffice aza aho - mamela ahy hanim-po tsara foana eo am-bavako izany, tsara ny fitsarany.
Misaotra nizara, mihoby!
Na dia mbola tsy manana fanohanana ny endrika .doc aza izy dia tsy manandrana mampiasa xD akory satria tiako ity fanitarana ity; Aleo ampiasaina araka ny fahendrena ao amin'ny sekoliko TT
Noho izany dia mijanona ianao ary miandry ny famoahana ny famaritana Microsoft
tutingo dia hoy izy:
Tsaroako tsara fa ny calligra dia nihazakazaka tonga lafatra ny fanitarana .docx izay tsy nisy suite hafa tao amin'ny GNU / Linux nanao na diso ny nataon'izy ireo ...
Mamaly an'i tutingo
Mba hanoherana ny LibreOffice-ko sy hampiasa Calligra, voalaza izany.
Mba hanokafana rakitra .doc tsy misy olana dia mampiasa ny Kingston Office ho an'ny GNU / Linux aho, ary tena mety amiko izany. Ho an'ny endrika OOXML dia mampiasa LibreOffice aho.
Tena mahaliana…. toa mitovy daholo ny suite an'ny biraon'ny Linux. Open Office sy LibreOffice dia efa nampiditra ny sidebar tamin'ny andrana andrana.
Tsia, ao amin'ny AOO dia tsy fanandramana velively, raha te haharaka ny vaovao momba ny AOO ianao dia afaka mamaky ao amin'ny forum ofisialy momba izany: http://forum.openoffice.org/es/forum/viewforum.php?f=75
Latex no tsara indrindra ho an'ny Linux, ny hany tsy hitako izay soloina dia ny takelaka
namako azy ny namako, mila mamaky kely fotsiny ianao, efa zatra izany izahay ary miova hatrany ny vidiny.
fa raha manao azy amin'ny fotoana sy ny faniriana, raha misy lohan'ny vonjy taitra hahomby
Raha efa mampiasa LaTeX ianao dia andramo ny manandrana ny LyX, izay mametraka interface interface amin'ny saika ny zavatra rehetra efa ampiasainao ary mila manoratra amin'ny tanana ianao, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny mamela anao hanitsy ireo latabatra amin'ny sary (superdeficiency of Latex)
Te hahita ny LXDE alefa any amin'ny QT aho mba hitsapana azy io hehehe amin'ny fotoana hijanonako amin'ny libreoffice fotsiny ho an'ny fisehoana
Tsy azoko, rehefa KOffice io dia nilaozana an-taonany maro ary ankehitriny nomena anarana hafa, te hiara-miasa ve ny rehetra?
Eny, toa izany, raha manova anarana ho konqueror izy ireo dia hiara-miasa ihany koa? TPT.
Miaraka amin'ny AMD izahay dia nihaona indray